Bahamas dia miarahaba ny sidina voalohany an'ny Frontier Airlines mankany Nassau
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Bahamas dia miarahaba ny sidina voalohany an'ny Frontier Airlines mankany Nassau
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Jona 25, 2021
Bahamas dia mandray ny Frontier Airlines mankany Nassau ao amin'ny Lynden Pindling International Airport
Ny Bahamas dia nandray ny sidina voalohany an'ny Frontier Airlines omaly tamim-pientanam-po tokoa rehefa tonga tao amin'ny Lynden Pindling International Airport. Frontier no mpitatitra entana lafo vidy voalohany miditra amin'ny tsena Karaiba miaraka amin'ny andro fitsangatsanganana maro isan-kerinandro.
Frontier dia hiasa sidina mivantana avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami (MIA) mankany Nassau (NAS) inefatra isan-kerinandro, manomboka ny Jolay 2021.
Eo amin'ny lalan'ny fanarenana fizahan-tany sy famerenana amin'ny laoniny ny toekarena i Bahamas taorian'ny rivodoza nandrava sy ny areti-mandringana COVID-19.
Fisondrotan'ny fiakarana an-habakabaka avy amin'ny tarehin-tsoratry ny loharanom-baovao lehibe izay singa iray lehibe amin'ny tetikadin'ny Ministera amin'ny ankapobeny amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fizahantany.
Rehefa mitohy ny fiverenana miverimberina, dia dodona ny handray ny mpitsidika miverina miaraka amin'ny safidin'ny sidina bebe kokoa ny Bahamas amin'ity fahavaratra ity. Frontier dia hiasa sidina mivantana avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami (MIA) mankany Nassau (NAS) inefatra isan-kerinandro, manomboka ny Jolay 2021.
Nandritra ny lanonana fanokanana sy fifanakalozana takelaka voalohany, Hon. Dionisio D'Aguilar, minisitry ny fizahan-tany sy fiaramanidina MP, dia nitondra fanamarihana tamin'ny sidina voalohany an'ny Frontier Airlines avy any Miami ka hatrany Nassau. Sary natolotr'i Kemuel Stubbs.
Ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina, ny Hon. Dionisio D'Aguilar, dia isan'ireo tompon'andraikitra nivory tao amin'ny seranam-piaramanidina Sir Lynden io tolakandro io mba hiarahaba ny sidina voalohany ary naneho ny teny fankasitrahana izy.
Fifanakalozana takelaka nataon'i Hon. Dionisio D'Aguilar, MP, Minisitry ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina ary ny mpitantana ny Frontier Airlines nandritra ny lanonana ho an'ny sidina voalohany an'ny Frontier Airlines avy any Miami ka hatrany Nassau.
“Voninahitra sy faly aho fa nanapa-kevitra ny hiara-miasa aminy ny Frontier Airlines Ny Bahamas, indrindra amin'ity vanim-potoana mitsikera ity, rehefa miditra amin'ny làlan'ny fanarenana fizahan-tany sy famerenana amin'ny laoniny ny toekarena isika taorian'ny rivodoza nandrava ary farany, ny areti-mandringana COVID-19. Manararaotra ity fotoana ity aho handraisana tsara ny fandraisana Bahamianina anao ary hanehoana ny fankasitrahanay tanteraka ny fiaraha-miasanay. ”
Ny sary havia sy havanana amin'ny seranam-piaramanidina Miami dia i Barry Biffle, filoha sady CEO an'ny Frontier Airlines, ary Ramatoa Linda Mackey, Consul jeneralin'ny Consulat Bahamas Consulate Miami. Natolotry ny Frontier Airlines fanomezana ho an'ny nosy The Bahamas ny maodely iray amin'ny Frontier Airlines Airplane ary ny The Islands of The Bahamas dia nanolotra sary noforonin'ny mpanakanto malaza Bahamiana iray, Jamaal Rolle.
Ny fanampiana ny Frontier Airlines ho an'ireo mpitatitra fiaramanidina mitombo isa izay manompo an'i Bahamas dia vokatry ny fandehanana ataon'ny minisiteran'ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina ary ny mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny fampivoarana ny rivotra amin'ny toerana aleha. Fisondrotan'ny fiakarana an-habakabaka avy amin'ny tarehin-tsoratry ny loharanom-baovao lehibe izay singa iray lehibe amin'ny tetikadin'ny Ministera amin'ny ankapobeny amin'ny famerenana ny fizahantany.
“Ny sidina marobe an'ny Frontier Airlines dia manome rivotra madio vaovao ho an'ny toekarem-pizahantsika satria mampitohy ny tanjontsika any amin'ny ivon'ilay atsimo atsinanan'i Etazonia io sidina an'habakabaka io, ao anatin'izany i Florida, tsena iray ahazoantsika mpitsidika isan-taona manan-danja. »Hoy ny minisitra D'Aguilar.
Ny vahiny dia hanana fotoana hankafizana ireo morontsiraka mahafinaritra sy hijery ireo tolotra mahafinaritra ao Nassau sy Paradise Island.
Jereo ny nosy rehetra atolotra ao https://www.bahamas.com/ na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram.
Vaovao misimisy momba an'i The Bahamas
Diso ny fanarenana ny fizahan-tany any Dominika? Simpson's ...
New Cuba Travel: Tsy misy confinement, tsy misy fitsapana
Manitatra ny fandrarany ny votoatin'ny fanoherana vaksiny REHETRA ny YouTube
Fitsangatsanganana sy fizahan-tany any UK: Tatitry ny fiatraikany COVID
Nampiato ny sidina Kabul ny Pakistan Airlines taorian'ny Taliban ...